Kordhinta safarada loo yaqaan 'YHT', u hel qiimo dhimis ardayda badan | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraKordhinta safarada loo yaqaan 'YHT', U hel ardayda qiimo dhimis badan
26 / 02 / 2020 06 Ankara, 42 Konya, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
Kordhi safarada yht oo sii ballaadhi meelaha ku habboon
Khadadka Tareenka Xawaare Sare ee Konya-Ankara wuxuu sii wadaa inuu ka mid noqdo waddooyinka gaadiidka ugu doorbidaan muwaadiniintu. Tirada rakaabka, oo ahaa 2018 milyan sanadka 8,1 ee YHTs, ayaa kordhay 2019 boqolkiiba sanadka 2 ilaa 8,3 milyan. Dhamaadka sanadkii hore, taariikhda jamhuuriyada waxaa ku jabay xamuul iyo rakaab xamuul qaada.
Marka la raaco tareennada xawaaraha sare (YHT) ee ay maamusho Agaasinka Guud ee Gaadiidka TCDD, waxaa jiray koror rikoor ah oo ka jira magaalooyinka waaweyn, tareennada gobolka iyo magaalooyinka marka loo eego sanadihii hore. Tirada rakaabka, oo ahaa 2018 milyan sanadka 8,1 ee YHTs, ayaa kordhay 2019 boqolkiiba sanadka 2 ilaa 8,3 milyan. In kasta oo tirada rakaabka qaada tareennada caadiga ahi ay kordheen 2018 milyan sanadkii 16, waxay kordheen 2019 boqolkiiba sanadka 10 illaa 17,5 milyan. In kasta oo baahida loo qabo tareennada rakaabka caalamiga ahi ay sidoo kale korodhay, tareennada Istanbul-Sofia, Van-Tehran iyo Trans Asia ayaa adeegsaday 2018 kun oo rakaab ah sannadka 200, iyo 2019 kun oo rakaab ah sannadka 15, oo ah 230 boqolkiiba oo kordhay. U adeegida 2018 milyan oo rakaab ah 68, Marmaray iyo Gebze-Halkalı Markii la dhammaystiro khadka, tirada rakaabka ee la qaaday sanadka 2019 ayaa sare u kacday boqolkiiba 84 ilaa 124 milyan. Tan iyo markii la furay 500ka Nofeembar 20, oo in ka badan 2019 kun oo rakaab ah ay ku dhaqaaqeen Marmaray, ayaa rikoorkii ugu badnaa ee rakaabkii la jabsaday. Tirada rakaabka ay wateen Başkentray, ee ku shaqeeya khadka Kayaş-Sincan ee magaalada Ankara, waxay sidoo kale kor uga kaceen 67 milyan ilaa 8,5 milyan, korodhka 14 boqolkiiba marka la barbar dhigo sanadkii hore. Waxay kaloo kordhisay gaadiid xamuul. Sanadka 2019, 29,3 milyan oo xamuul ayaa xamuul ah.
LAMBARKA XAQIIQADA LAGU SAMEEYEY EE HAATKA KA SAMEEYAAN 53 milyan
Wadooyinka tareenka, dhererka xariiqda digniinta, oo ahayd 2003 kun 2 km 505, waxay kordhay 155 boqolkiiba illaa 6 kun 382 km. Sidaa darteed, 50 boqolkiiba khadadka tareenka ayaa laga calaamadeeyay. Shaqadu sidoo kale waxay ka sii soconaysaa khadka tareenka oo dhererkiisu yahay 739 km. Turkey waa dal oo Yurub ah 8-dii ka hawlgala dhererka line 6 YHT sida dunidu ay gaareen 213 kun km. Tirada guud ee rakaabka ay xireen wadooyinka Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya iyo Ankara-Istanbul Speed ​​Speed ​​Train (YHT) ayaa dhaaftay 53 milyan. Hawlaha dhismaha waxay kusii socdaan wadooyin dhan 8 YHT iyo Wadada Xawaaraha Sare (HT).
MADAXWEYNAHA JAMHUURIYADA: YHT
Tareenka Xawaaraha Sare, oo laga doorbido in ka badan baabuurta kale ee gaadiidleyda ee dhexdhaxaadka ah, ayaa danta shacabka ka heleysa. Muwaadiniinta waxaa laga codsanayaa inay ku daraan duulimaadyo dheeri ah tareenka Xawaaraha Sare, kaasoo badbaadiya waqtiga iyo lacagdaba.
WAA IN AAD KA BADAN KARTAA WAQTIGII '
Rakaabka Mehmet Ali erer wuxuu soo jeedinayaa inay tahay in duuliyayaashu intaa ka sii badnaadaan, Rakaabka Mehmet Ali erer wuxuu yiri, waxaan ka imid Karaman waxaanan adeegsadaa tareenka xawaaraha dheer marka aan u safro Ankara. Waxaan jeclaan lahayn safarro dheeri ah. Tareenka degdega ah, sida magacu tilmaamayo, ayaa noo suurta geliya inaan si dhaqso leh u gaarno halka loo socdo. Aad ayaan ugu faraxsanahay arintaan. Haddii aan raaco bas, ma badbaadin karo labadaba waqtiga iyo lacagta. Fikradayda, tareenka xawaaraha sare leh ayaa faa iido badan leh. Qiimaha socodku dheer ma jirin, in kastoo hadda aan qiimahan la awoodi karo marka la barbar dhigo hababka kale ee gaadiidka, in kasta oo qiimahoodu uu kordhay. Taasi waa sababta aan uga taxadarayo in aanan isticmaalin wado kale oo gaadiid ah mooyee mooyee. ”
'WAAD KA SAMEEYSAA SI AAD UGU SAMEEYSA SITE-DA'
Isagoo caddeeyay in meesha ay ku taallo Xarunta Tareenada Xawaaraha Sare ku yaalliin ay tahay goob taariikhi ah aadna ay ugu faraxsan yihiin sababta oo ah waa meel dhexe, Yolcu Erol Öner wuxuu yiri, "Waxaan adeegsadaa tareenka xawaaraha sare marka aan aado Ankara ee Istanbul. Qiimaha ayaa kor u kacay, laakiin aad ayaan ugu faraxsanahay adeegga tareenka xawaaraha sare. Waxaa jira hal arin oo kaliya oo ina xanaaqaya. Waxaan aad ugu faraxsanahay meesha saldhigga uu ku yaallo Saldhig Tareen Xawaare Sare ku yaal. Waxay udub dhexaad u tahay meel kasta. Waxaan bixin karnaa gaadiid fudud. Sidoo kale waa goob taariikhi ah. Tani waxay ahayd bartanka magaalada 100 sano kahor. Waxaan nimid sanadka 2020, mar labaad, xarunta magaalada. Markaa way fiicnaan lahayd haddii xarunta tareenka aanu halkaan u dhaqaaqin. Waxa kale oo jira arday iyagu si joogto ah u isticmaala tareenka xawaaraha ku socda. Qiimo dhimis gooni ah ayaa looga baahan yahay gaar ahaan ardayda. Sababtoo ah waxaa jiri kara arday xaaladooda dhaqaale aysan fiicneyn oo dhibaato dhaqaale haysato. Kuwani waa in sidoo kale tixgalinta la siiyaa. Waxay sidoo kale aad uga fiicnaan laheyd haddii adeegga cuntada iyo cabitaanka la yimaado. "Way fiicnaan lahayd in qof walba la siiyo adeeg isku mid ah iyo qiimo isku mid ah," ayuu yidhi.
'KA DHACA MACLUUMAAD DHEERAAD AH'
Isagoo Carabka ku adkeeyay baahida loo qabo dhimista ardayda Tareenka Xawaaraha Sare, Yolcu Kıymet Kavurga ayaa yidhi, “Aad ayaan ugu faraxsanahay adeegga tareenka xawaaraha sare. Maadaama saldhiga uu ku yaal magaalada, waxaan u safraynaa maalinta aan imaano. Gaadiidka Mevlana waa dhowdahay, waxaan ka dukaameyneynaa baaraha. Hal maalin ayaa lagu soo celin karaa. Waxaan sidoo kale ku faraxsan nahay qiimaha. Waxay leedahay faa'iidooyin badan habka kale ee gaadiidka. Taasi waa sababta aan inta badan doorbido tareenka xawaaraha sare. Way fiicnaan lahayd haddii adeegyo dheeri ah lagu daro saldhigga jira halkii la rari lahaa uun in la raro xarunta tareenka. Intaa waxaa u dheer, tareenka xawaaraha sare ku socdaa wuxuu ku jiraa gacanta dawladda, mana aha mid gaar loo leeyahay. Tusaale ahaan, kuma qanacno saldhigga ku yaal Ankara. Sababtoo ah waa mid aad u dhib badan sida galmada oo kale. Laakiin meeshani waa mid aad u deggan. Arrin kale oo aan jeclaan lahaa inaan xuso waa; ardaydu waxay ka fa'iideystaan ​​dhimis, laakiin dhimis kale ayaa loo baahan yahay in la sameeyo. Waxaa jira arday maalin walba yimaada. Waxaa la siin karaa maraq, bagel iyo shaah. Qiimaha diiwaangelinta ardayda ayaa aad u kordhay. Wax dhibaato ah ugama imaan qofka akhrinaya. Dadka aqrinaya dalkan way badbaadin doonaan. "Waa faaido in la siiyo qiimo dhimis gooni ah," ayuu yidhi.
TALOOYIN KU SAABSAN kuwa kale '
Isagoo hoosta ka xariiqay inuu ku qanacsan yahay adeegga tareenka xawaaraha sare isla markaana uu ka faa iidaysan karo hababka kale ee gaadiidka, Hacer Yavaş wuxuu yidhi, "Anigu waxaan ahay Konya. Waxaan aadayaa Ankara aniga iyo saaxiibkay. Markii aan ka hor tegay, meelna kama helin meel tareen xawaare sare ku yaal. Waxaan ku qasbanaaday inaan raaco bas. Waxaan badiyaa doorbida tareenka xawaaraha sare maxaa yeelay guriga saaxiibkay wuxuu ku dhow yahay tareenka xawaaraha sare laakiin aad ayey uga fog tahay A tooTŞ. Safarku wuxuu qaataa afar saacadood markii aan baska raaco, laakiin waxaan halkaas joogaa 1 saac gudaheed aniga oo raacaya tareenka xawaare ku socda. Aad ayaan ugu qanacsanahay adeegga. Labada kursi waa kuwo aad u ballaaran oo raaxo leh. Qiimayaashu waxyar ayey kordheen, laakiin aniga, ma jiro wax sii kordha. Qiimahaas oo kordhay awgood, dadku sidoo kale aad ayey ugu faraxsan yihiin haddii cunnooyinka fudud sida keega iyo casiirka lagu siiyo tareenka. Sidookale, wax dhib ah igama soo arag sagxadaha tareenka ilaa maanta. Waxyaabaha ay ka mid yihiin xafaayado iyo saabuun had iyo jeer dhaca. Uma arko cillad arrintan ku saabsan midkoodna. Waxaan rajeynayaa in adeegyadan oo kale ay sii kordhayaan. ”
'LACAG-LA'AAN LACAG AH'
Sümeyye Doğan, oo ku doodaya in boorsooyinka boorsada ee xawaaraha xawaaraha dheer leh la kordhiyo, “Aad ayaan ugu faraxsanahay adeegga tareenka xawaaraha sare. Waxaan ahay arday ku sugan Konya. Qoyskayga waxay ku nool yihiin Istanbul. Waxaan door bidaa tareenka xawaaraha ku socda ee aan ku socdo Istanbul. Si kastaba ha noqotee, markii ay tahay inaan si deg-deg ah u baxo, waa inaan adeegsadaa bas. Sababtoo ah waxaan u maleynayaa inaysan jirin meel lagu safro, way qurux badnaan laheyd haddii ay kordhiyaan tirada safarada. Haddii kale, waa inaan iibsadaa toddobaad ama laba kahor. Marka laga soo tago taas, kuraasta waa kuwa raaxo leh, laakiin boos uma helayo boorsooyinka. Waxaa jira kuwa keena wax ka badan hal shandado, mararka qaar ma jiraan meel loo dhigo shandada. Xaqiiqdii, waan ogahay kuna noolaa markii boorsooyinka iskuulka ay fasax ahaayeen, markii shandada la soo uruuriyay albaabka laga soo galo mana jirin meel la maro. Maaddaama waddooyinka ay ciriiri yihiin, ma jiro fursad lagu meeleeyo halkaas. Sidii aan idhi, aagagga boorsooyinka la dhigo ayaa waliba fiicnaanaya haddii wax yar la ballaariyo. Cidna dhib kuma noqon doonto. ”(Sümeyra Kenesarı /Wargeys Cusub)
Batman-Diyarbakir Oo Kordhi Duulimaadyada Tareenka
Kordhinta Adeegga Tramarka ee Samsunda
Bixinta Bursaray iyo Jadwalka Buska ee Boosaaso
YHT socdaalka socdaalka gaadiidka 10 waqtigiisu wuu ka jaban yahay
Qiimeeyn loogu talagalay Dhamaadka Tareenka Eurasia
Dakhliga 33 ee Dakhliga Baarkinka ee Ordu
Lacagaha Lacagta Gaadiidka Dadweynaha ee Mersin
Qiimo dhimis Gawaarida gaadiidka ee Samsun
Xarunta tareenka xawaaraha sare ee Konya